"Oge Gara Aga na Ugbu A" nke Artificial Grass
N’April 1966, Astrodome dị na Houston, Texas, nnukwu ámá egwuregwu ime ụlọ n’oge ahụ, jiri nwayọ chere maka mmalite nke baseball league dị ka ọ dị na mbụ, mana ihe dị iche bụ na tupu mbido, Chemstrand etinyela mpempe akwụkwọ wuruwuru nke ụwa. na baseball ubi- ”Astrotu ...
Anụmanụ wuru wuru n’ọkụ, ahịhịa wuru awụ abịala ọzọ!
N'azụ mmechuihu nke bọọlụ China, ụlọ ọrụ China na-arụpụta ọkaibe bụ onye mmeri ụwa na-apụ. N'oge na-adịbeghị anya, Jiangsu Co-creation Lawn, dị ka "akụkụ mbụ nke turf artificial" na ahịa A-share, dọtara mmasị dị ukwuu. Shell Investment Research chọpụtara na ọ bụ ezie Chi ...
Kedu akụkụ nke turf wuru nwere ike iji mee ihe na otu esi ahọpụta?
A haziri ahịhịa artificial ka emepụtara maka ntụpọ nke ahịhịa nkịtị. Ọnọdụ ihu igwe, ọnọdụ njikwa na ọnọdụ nchedo na ihe ndị ọzọ na-emetụta turf anụ ọhịa. Arfik wuru nwere uru a na-apụghị ịgbanwe agbanwe nke turf. Arfik wuru anaghị eri ihe ...